Boqor Cabdallaha Saudi Arabia oo shaqadii ka eryey nin muxaafid ah oo la taliye u ahaa Golahha Wazaaradda – Radio Daljir
Boqor Cabdallaha Saudi Arabia oo shaqadii ka eryey nin muxaafid ah oo la taliye u ahaa Golahha Wazaaradda
Riyad, May 12 – Boqorka dalka Saudi Arabia Cabdalla Ben Cabdi Casiis ayaa shaqadii ka eryey mid ka mid ragga xagjirka ah ee la taliyayaasha u ahaa golaha wazaradda ee dalkaasi sucuudiga oo lagu magcaabo Sheikh Cabdi Muxsin Al-Obeykan.
Shiikhaasi Al-Obeykan ayaa ka horjeeday debcintii lagu sameeyey kaalinta dhinaca siyaasadda ee haweenka dalkaasi Saudi Arabia .
Go?aanka boqor Cabdalla ee shaqada laga eryayey wadaadkan muxaafidka ah ayaa imanaya inyar uun kaddib markii uu weeraray qorshaha ay wadaan dad saamayn leh oo uu sheegay in ay doonayaan in ay bedelaan heerarka iyo derejadda haweenka.
Saraakiisha wadanka Saudi Arabia ayaan sheegin sabaha rasmiga ah ee shaqada lagaga eryey Sheikh Cabdi Muxsin Al-Obeykan,laakiin waxaa la rumaysanyahay in macangagnimadiisa dhinaca diintu ay sabab u tahay go?aanka shaqada lagaga eryey.
Hadalo dhowaan uu jeedinayey wadaadkaasi ayaa weerar ku ahaa qorshayaasha lagu debcinayey qawaaniinta ad-adag ee boqortooyada Saudi Arabia.
Boqor Cabdallaha Saudi Arabia ayaa balanqaaday in haweenka Saudi Arabia ay mustaqbalka dhow xaq u yeelanayaan in ay codkooda ka dhiibtaan doorashooyinka mustaqbalka ee dalkaasi.
Police-kii dhinaca diinta ee Saudi Arabia ee lagu magcaabijiray “mutawa”, oo ahaa mid arxandaran ayaa bishii January ee sanadkan lagu bedelay police qunyar socod ah oo furfuran.
Dalkaasi Saudi Arabia ayaa immika ku jira qorshe weyn oo lagu bedelayo afkaarta xagjirka ah ee dalkaasi ,si loo xoojiyo qunyar-socodnimada iyo dulqaadka.